Fiteny indô-eorôpeanina : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Fiteny indô-eorôpeanina : Fahasamihafan'ny versiona roa
Fiteny indô-eorôpeanina (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Janoary 2020 à 10:53
5 750 octets ajoutés , il y a 8 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Janoary 2020 à 08:32 (hanova)
k (nanova ny anaran'i Fiteny indô-eoropeanina ho Fiteny indô-eorôpeanina i Thelezifor)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Janoary 2020 à 10:53 (hanova) (esory)
Ny '''fiteny indô-eorôpeanina''' dia fiteny ivondronan'ny fiteny any [[Eorôpa]] sy any [[India]]. Misy 1. 000 eo ny isan'ny fiteny avy amin'io fiteny io. Misy olona 3 lavitrisa no miteny amin'ny fiteny indô-eorôpeanina. Fianakaviam-piteny tenenina maneran-tany izy ireo, izay ahitana ny [[fiteny albaney]], ny [[fiteny armeniana]], ny vondrom-piteny [[Fiteny balto-slava|balto-slava]], [[Fiteny seltika|seltika]], [[Fiteny jermanika|jermanika]], [[Fiteny helenika|helenika]], [[Fiteny indo-iraniana|indô-iraniana]], [[Fiteny italika|italika]] (isan'izany ireo [[fiteny rômana]]), ary vondrom-piteny maty roa, dia ny vondrom-piteny [[Fiteny anatoliana|anatoliana]] (isan'izany ny [[fiteny hitita]]) sy ny vondrom-piteny [[Fiteny tokariana|tokariana]]. Ankehitriny dia misy 6 tapitrisa ny olona miteny indô-eorôpeana.
== Vondrona ao amin'ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana ==
=== Ny vondrom-piteny anatoliana ===
Ny vondrom-[[Fiteny anatôliana|piteny anatôliana]] dia ahitana ireo fiteny maty notenenina tao [[Anatolia]] tamin'ny [[Andro Taloha]] toy ny [[fiteny hitita]], fiteny lovita, fiteny palaita, fiteny lidiana, fiteny likiana, fiteny miliana, fiteny kariana, fiteny sidetika ary ny fiteny pisidiana.
=== Ny vondrom-piteny tôkariana ===
Ny vondrom-piteny tôkariana na [[Fiteny agni-kotsy|agni-kotsy]] dia ahitana ireo fiteny maty telo, dia ny fiteny agneana sy ny fiteny kotseana ary ny fiteny kroraniana, izay notetenina tao amin'ny lemak'i Tarima tamin'ny taonarivo voalohany taor. <abbr>J.K.</abbr>, ao atsimion'ny faritra mizakatenan'i Xinjiang any [[Sina]].
=== Ny vondrom-piteny balto-slava ===
Ny vondrom-[[Fiteny balto-slava|piteny balto-slava]] dia misampana roa, ka ahitana ireo [[fiteny balta]] sy ireo [[fiteny slava]].
* Fiteny balta ([[fiteny litoaniana]], fiteny letôna (na letviana), fiteny korôniana, fiteny selôniana, fiteny semigaliana, fiteny prosiana taloha, fiteny skalviana, fiteny sodôviana).
* [[Fiteny slava]] ([[fiteny rosiana]], [[fiteny belarosiana]], [[fiteny rosina]] (na rotena), [[fiteny okrainiana]], [[fiteny tseka]], [[fiteny slôvàka]], fiteny sôraba, [[fiteny poloney]], fiteny kasoba, fiteny pôlaba, fiteny slôvinka, fiteny silesiana, [[fiteny serbô-kroatiana]] (ahitana ny fiteny kroatiana sy ny fiteny bôsniana, ny fiteny môntenegriana ary ny [[fiteny serba]]), [[fiteny bolgariana]], fiteny makedoniana, fiteny slôvena).
=== Ny vondrom-piteny keltika ===
Ny vondrom-[[Fiteny keltika|piteny keltika]] na seltika dia misampana roa, ka ahitana ireo fiteny keltika an-tanibe sy ireo fiteny keltika a-nosy (ireo [[fiteny gaelika]] sy ireo [[fiteny britônika]]).
* Fiteny keltika an-tanibe: fiteny gaoloà, fiteny lepontika, fiteny keltibera, fiteny galatiana (na galata), fiteny norika,
* Fiteny gaelika: fiteny ekôsey, [[fiteny irlandey]], fiteny gaelga),
* Fiteny britônika: fiteny galoà na kimrika, fiteny kornika, [[Fiteny bretona|fiteny bretôna]], fiteny kambriana ary fiteny pikta.
=== Ny vondrom-piteny jermanika ===
Ny vondrom-piteny jermanika dia misampana telo, ka ahitana ireo fiteny jermanika atsinana (fiteny maty) sy ireo fiteny jermanika avaratra ary ireo fiteny jermanika andrefana.
* Fiteny jermanika atsinanana: fiteny gôtika sy fiteny jermanika maro hafa izay tsy misy mpiteny intsony.
* Fiteny jermanika avaratra tao hoe [[fiteny skandinaviana]]: [[fiteny islandey]], [[fiteny nôrveziana]], fiteny ferôiana, ny [[Fiteny danoa|fiteny danoà]], ny [[Fiteny soedoa|fiteny soedoà]].
* Fiteny jermanika andrefana, [[fiteny anglisy]], ny fiteny frisôna, ny [[fiteny neerlandey]], ny [[fiteny alemàna]], ny [[fiteny afrikansa]] ny [[fiteny idisy]].
=== Ny vondrom-piteny helenika ===
Ny vondrom-piteny helenika dia ahitana ny fiteny mikeniana, ny fiteny arkadiana, ny fiteny kipriôta, ny fiteny pamfiliana, ny [[fiteny grika taloha]], ny [[fiteny grika kôine]], ny [[fiteny greka vaovao]], ny fiteny iôniana, ny fiteny beôtiana, ny fiteny lesbiana, ny fiteny tesaliana, ny fiteny makedôniana taloha, ny fiteny dôriana, ny fiteny eleana, ny fiteny etôliana, ny fiteny lôkriana ary ny fiteny fôkidiana.
=== Ny vondrom-piteny indô-iraniana ===
Ny vondrom-piteny indô-iraniana dia ahitana ireo [[fiteny iraniana]] sy ireo [[Fiteny indo-ariana|fiteny indô-ariana]] ary ny fiteny noristany.
* Fiteny iranika: isan'izy ireo ny fiteny avestika, ny [[fiteny persiana taloha]], ny fiteny iraniana antenantenany, ny [[fiteny persana vaovao]], ny fiteny pastô (ao Afghanistàna), ny [[fiteny korda]], ny fiteny balotsy, ny fiteny skitiana, ny fiteny sarmatiana ary ny fiteny oseta.
* Fiteny indô-ariana: isan'ireo ny [[fiteny sanskrita]], ireo fiteny prakrita, ny [[Fiteny hindi|fiteny hindy]], ny [[fiteny ordo]], ny [[fiteny bengaly]], ny [[fiteny gojaraty]], ireo fiteny indiana, ny [[fiteny nepaly]], ny [[fiteny singaley]], ireo fiteny darda (fiteny kasmiry, fiteny romany).
* Fiteny noristany: ny fiteny askona, ny fiteny kamviry, ny fiteny katy, ny fiteny prasona, ny fiteny tregamy ary ny fiteny oaigaly.
=== Ny vondrom-piteny italika ===
Mizara ho sampana telo ny vondrom-piteny italika, dia ireo [[fiteny latiniana]] (na [[Fiteny latino-faliska|latino-faliska]]) sy ireo [[fiteny ôsko-ômbriana]].
* Fiteny latiniana na latino-faliska, izay ahitana ny [[fiteny latina]], ny fiteny faliska, ireo [[fiteny rômana]] (fiteny sarda, [[fiteny romaniana]], fiteny dalmatika, [[fiteny italiana]], [[fiteny espaniola]], [[fiteny ladino]], [[Fiteny portogey|fiteny pôrtogey]], [[fiteny frantsay]], [[fiteny ôksitana]], [[Fiteny katalàna|fiteny katalana]], [[Fiteny romantsa|fiteny rômantsa]], [[fiteny ladîna]], fiteny friôlana), sns.
* Fiteny ôsko-ômbriana, izay ahitana fiteny tsy misy mampiasa intsony, dia ny fiteny ôska sy ny fiteny ômbriana ary ny fiteny maro hafa koa.
=== Ny fiteny albaney sy ny fiteny armeniana ===
Fiteny manirery ny [[fiteny albaney]] sy ny [[fiteny armeniana]].ao amin'ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeanina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/979042"